The Definitive Guide to Testosterone propionate powder from | AASraw
Ihe na 01 / 23 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na testosterone propionate.
1.What bụ testosterone propionate ntụ ntụ? 2.Gịnị bụ Testosterone propionate okirikiri?
3.Otu esi agbara Testosterone Propionate? 4.Otu esi agbara Testosterone Propionate?
5.Effects nke Testosterone Propionate ntụ ntụ (na-achọsi ike) 6. Mmetụta nke Testosterone Propionate ntụ ntụ (na otu esi emeso ha)
7.Price nke Testosterone Propionate ntụ ntụ 8.Buy Testosterone Propionate ntụ ntụ online
1.What bụ testosterone propionate ntụ ntụ?
Testosterone propionate ntụ ntụ nwere nsonaazụ androgenic a kapịrị ọnụ: ọ na-akpali mmepe na ọrụ nke genitalia mpụga, prostate, seminal vesicles, na àgwà abụọ nke nwoke na nwanyị (olu, ntutu). Ọ na-ekere òkè na e guzobere usoro ochichi ahụ na omume mmekọahụ na ụmụ nwoke, na-akpali libido na ike, ma na-akpali spermatogenesis. Ọ na-ebelata mmepụta nke hormone na-akpali akpali na luteotrophic na follicle.
Testosterone bụ onye na-emegide nwanyị hormoni nwanyi - estrogen, nwere mmetụta antitumor na ụbụrụ ara na ụmụ nwanyị. O nwere mmetụta na-emetụta ụbụrụ, na - akpata mkpali nke njikọ protein, na - ebelata abụba, na - edebe ihe ndị dị mkpa maka njikọ protein, potassium, phosphorus, sọlfọ, ịkwalite ndozi calcium n'ime ọkpụkpụ na ịmalite ikuku. Na nri protein zuru oke na-akpali mmepụta nke erythropoietin.
2.Gịnị bụ Testosterone propionate okirikiri?
A na-eji usoro hypogonadism nke primtosterone propionate eme ihe n'usoro, ịchọrọ ụbụrụ; enweghi nkwarụ endocrine genesis, ọrịa post-castration, nwoke menopause; infertility n'ihi mmebi nke spermatogenesis; osteoporosis kpatara enweghi androgens, acromegaly, nke mbụ nke hypertrophy prostate. Ọrịa na-adabara na ụmụ nwanyị (ara, ara nwanyị), ọrịa menopausal n'ime ụmụ nwanyị (tinyere estrogens); ọbara ọgbụgba na hyperestrogenism; mastitis, na-esonyere site na-egbu mgbu premenstrual erughị ala nke mammary glands; endometriosis, fibroids uterine bụ ihe kpatara ya jiri testosterone propionate okirikiri. A na-etinye propionate na ọgwụgwọ anaemia n'ime ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na enweghi mmezi nke ọgwụgwọ na-akpata (dị ka ihe na-edozi iji agwọ ọgwụgwọ).
Dị ka onye na-emepụta ihe anabolic testosterone propionate na-eji n'ọnọdụ dịgasị iche iche nke ọrịa na-esonyere site na mgbasawanye nke ndị na-edozi (ọrịa ndị na-adịghị ala ala, ike ọgwụgwụ, ịwa ahụ, mmerụ, ọtụtụ ụmụ nwoke).
Njiri na-aga na 50 ma ọ bụ testosterone propionate 100 mg kwa 1 ml, nke dị mfe na zuru okè maka ndị amateurs na ndị ọkachamara. Maka mmalite ọ na-atụ aro 50 mg ụbọchị ọ bụla, maka ahụmahụ - testosterone propionate 100 mg / ml. Usoro a chọrọ ijiri estrogens na-eme ihe dị ka atụmatụ zuru ezu iji zere gynecomastia, njigide mmiri na mmetụta ndị ọzọ estrogenic. Mgbe ị gwụchara ihe ị chọrọ iji mee ka ị gbasaa mgbatị. A na-atụ aro ka ọ bụrụ cortisol blockers (protein whey ma ọ bụ amino acids, omega-3, ascorbic acid, wdg) na njedebe nke usoro ahụ ka ọ bụrụ na ị ga-edebe ya.
3.Otu esi eji Testosterone Propionate ntụ ntụ?
Ihe kachasị usoro ọgwụgwọ maka Testosterone Propionate bụ:
50 ka 100mg kwa ụbọchị
50 ka 100mg kwa ụbọchị 2nd
Ụbọchị 3B ọ bụla kwesịrị ịbụ nke kachasị nta n'ihi na ọ dị nso na ókèala nke Propionate ọrụ oge.
4.Otu esi agbara Testosterone Propionate?
Testosterone propionate na-eji intramuscularly ma ọ bụ subcutaneously na ngwọta mmanụ 0.5-1 mL nke 1% ma ọ bụ 5% ngwọta nke ọgwụ kwa ụbọchị, ụbọchị 1-2 site na 2 izu ruo ọnwa 1-2. A na-enwe ọgwụgwọ testosterone propionate n'okpuru nlekọta nke dibịa.
Mgbe eunuchidism, ịdabere na nkwarụ nke mmekọahụ ma ọ bụ ịwa mgbochi testosterone propionate bụ 0.025 g ma ọ bụ 0.050 g kwa ụbọchị. Site na mma nke ọnọdụ a gbanwere doses na 0,005-0,010 g kwa ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla.
Enweghị ike n'ihi ụkọ ọrụ, nhụjuanya na ike ọgwụgwụ uche na ike ọgwụgwụ, menopause nwoke na nsogbu ahụ ike na ọrịa nhụjuanya na dose bụ 0.010 g kwa ụbọchị ma ọ bụ 0,025 g 1-2 ụbọchị.N'ụzọ mbụ nke prostate testosterone propionate 10ml na-etinye ọ bụla ụbọchị ọzọ maka ọnwa 1-2. Na mmalite nke ọbara mgbali na angina, dose bụ 0.010 g nke 1-2 ugboro n'izu. Usoro ọgwụgwọ bụ 15-20 injections.With dysmenorrhea dose bụ 0,025 grams kwa ụbọchị (20-30 injections).
N'ihe gbasara ọrịa vascular na ọrịa na-adịghị mma nke njirimara dị ka mkpụrụ ndụ 0.010 g kwa ụbọchị, usoro ọgwụgwọ bụ ọnwa 1-1.5. Na ọrịa cancer nwa nwanyị na ọrịa cancer ara (n'okpuru 60 afọ) tinyere ma redtherapy, testosterone propionate na-enye na dose nke 0,050 g kwa ụbọchị maka ọnwa 3-3.5 wee wezie dose ahụ na 0,20-0 30 g kwa izu maka otu ọnwa, ụdi ọnwa abụọ dose ahụ bụ 0.15 g kwa izu, yana ọnwa 2 ọzọ - 0.10 g, mgbe ahụ, mmezi A na-edozi mkpụrụ ndụ nke testosterone propionate ọkara ndụ.
Na ịba ọcha n'anya na ọrịa cirrhosis nke dị n'elu imeju na ihe mgbaàmà nke ọbara mgbali elu na ascite otu n'ime atụmatụ intramuscular testosterone propionate na imeju bụ: ụbọchị 2 mbụ - 1 ml, mgbe 3 - 2 ml, 4 ụbọchị - 3 ml nke 1% ngwọta mmanụ nke ọgwụ; na 7 ụbọchị ọzọ - 1 ml nke 5% ngwọta mmanụ, ụbọchị 4 - 2 ml, na 2 ụbọchị - 1 ml nke 1% ngwọta.
Akwa dose nke testosterone propionate intramuscularly bụ: otu - 0.05 g (1 ml nke 5% ngwọta), kwa ụbọchị - 0.10 g (2 ml nke 5% ngwọta).
5.Effects nke Testosterone Propionate ntụ ntụ (na-achọsi ike)
mmebi-catabolic utịp na anụ ahụ ike site na-eme dị ka anti-glucocorticoid.
6.Sịpụta mmetụta nke Testosterone Propionate ntụ ntụ (na otu esi emeso ha)
Otu mkpụrụ ego nwere akụkụ abụọ, Dị ka ọtụtụ ana-agwọ ọrịa anabolic, enwerekwa mmetụta ụfọdụ nke Testosterone Propionate, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe ya banyere ya, ọ bụ ihe nkịtị .Just mara ya ma mụta otu esi emeso ya.
Ebumpụta Estrogenic nke Testosterone:
Ihe kachasị emetụta mmetụta nke Testosterone Propionate na-agbanye ikike ịmalite imepụta n'ime Estrogen. Testosterone n'onwe ya nwere arụmọrụ Estrogenic dị oke oke - ọ na - ejide onwe ya ka ọ dụnye ya na enzyme aromatase (enzyme nke kpatara mgbanwe nke Testosterone n'ime Estrogen). N'ihi nke ahụ, a na-atụ anya na a na-eji arụmọrụ aromatization eme ihe n'ụzọ dị oke ala n'aka Testosterone. Iji dozie nsogbu a, e nwere ihe ngwọta abụọ:
1.Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) dị ka Tamoxifen Citrate (Nolvadex) ma ọ bụ Clomifene (aha aha: Androxal, Clomid na Omifin) site na njide aka na-anabata ndị estrogen - na-ejuputa ha na igbochi estrogen site na njigide.
2.Aromatase Inhibitors (AIs) dị ka ọrụ Anastrozole (Arimidex) site na-egbochi usoro aromatase na ọbụna belata ogo nke estrogen ahụ. Ndị na-eme ihe ngosi Aromatis dị irè karịa SERMs.
Mmetụta dị n'akụkụ a sitere n'ọtụtụ estrogen na-arịwanye elu ma ndị na-emepụta aromatase (dị ka ihe atụ Anastrozole - Arimidex).
Ọbara mgbali elu:
Nke a sitere na nkwụsị mmiri. Ndị na-emepụta aromatase na-eche ya ihu.
Gynecomastia (aka Gyno / nnụnnụ tit nnụnnụ tit):
Gynecomastia bụ mmepụta ihe dị iche iche nke anụ ahụ n'ime ụmụ nwoke. A na-ejikarị ụbụrụ estrogen na-arịwanye elu nke anụ ahụ ara. Nke a na-adabere site na Onye Nhọrọ Estrogen Receptor Modulators ma ọ bụ ndị mmegide Aromatase.
Androgenic mmetụta nke Testosterone:
Ihe ndị na-akpata Testosterone androgenic nwere ihe jikọrọ ya na eziokwu ahụ bụ na Testosterone na-aghọwanye ike ma dịkwuo ike na androgen Dihydrotestosterone (DHT) site na 5-alpha reductase (5AR) enzyme.
Enzyme 5-alpha reductase na-adị n'ọtụtụ dị ukwuu n'ime anụ ahụ ụfọdụ, dị ka isi awọ, prostate, na akpụkpọ ahụ. Mgbe Testosterone rutera anụ ahụ ndị a, ọ na-enweta nnukwu ọnụ ọgụgụ nke mbelata n'ime DHT metabolite nwere ike na-emewanye. Ọ bụ DHT bụ nke kpatara oke mmetụta nke orrogenic mmetụta.
Mmetụta nke akụkụ a bụ ịdabere kpamkpam na ọdịdị mkpụrụ ndụ nke mmadụ. Ọ bụrụ na enweghi ndị isi nwoke nọ n'ezinụlọ gị, nke a agaghị abụrụ gị nsogbu. Ọ bụrụ na akpụ ụkwụ nwoke na-agba ọsọ na mkpụrụ ndụ gị, ị ga-efunahụ ntutu isi gị, ma testosterone supplementation nwere ike ime ngwa ngwa. Nke a nwere ike itinye aka na Finasteride na iji 2% Nizoral (Ketoconazole) shampulu.
O mmanu mmanu:
Mmanụ mmanu na-eme ka ntutu na-egbuke egbuke. Na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, ụmụ nwoke na-acha uhie uhie na-achọsi ike karị.
Ọkpụkpọ mmanu na-eme ka ọkpụkpụ ikpochapụ na-eme ka ọkpụkpụ akpụkpọ anụ dị na ya. Ruo n'ókè ụfọdụ, nke a nwere ike ịdaba site na iji Nizoral 2% shampoo, ebe onye na-arụsi ọrụ ike Ketoconazole na-arụ ọrụ dịka DHT blocker na akpụkpọ anụ, na-ebelata ihe gbasara nke puru na androgens na-ebute akpụkpọ ụkwụ nke nwoke na ihe nsị breakouts kpatara mmanu mmanu. A na-ekpochapụkarị ihe otutu na njedebe nke ndị steroid adịghị ogologo oge mgbe njedebe nke usoro protosterone.
Nnyocha egosiwo ihe doro anya n'etiti testosterone na mmegide. Gbalịa iweghasị ụdị njikwa mkpali - omume nke iwebiga iwe ókè na ihe omume nke na-agaghị emeli gị.
Ntugharị nke testicles:
Mgbe a na-eme ka testosterone na-apụ na-agbakwunyere mmepụta ihe na-eme ka a na-emepụta ihe na-emepụta. Nyocha ahụ na-akwụsị ịmịpụta testosterone n'ihi na e nwere ọtụtụ n'ime ya site na mberede ihu igwe. N'ihi ya, ha na-ada mbà. N'oge omumu testosterone enweghi otutu ihe anyi nwere ike ime banyere atrophy testicular. Ozugbo ojiji nke testosterone ndị dịpụrụ adịpụ na-abịa ná njedebe, a na-eji nwayọọ nwayọọ na-emepụta mmepụta nke testosterone dị na ya ma jiri nlezianya laghachi azụ zuru ezu. Ndị na-eme ihe na-eme ka ndị na-agwọ ọrịa gbakee site n'iji Clomiphene citrate (aha aha: Androxal, Clomid na Omifin). A na-ejikwa HCG (Gonadotropin nke mmadụ na-arụ ọrụ) iji weghachite mmepụta nke testosterone.
Na-agbakwunye na Testosterone, ụmụ nwoke na-ahụkarị libido (mmekọahụ drive). N'otu aka ahụ, ha na - ahụ ọnụ ọgụgụ nke libido n'oge ahụ mgbe testosterone supplementation ejedebe ma tupu e mepụtaghachi ihe na - emepụta testosterone (na clomiphene citrate ma ọ bụ HCG).
7.Price nke Testosterone Propionate ntụ ntụ
Ahịa dị iche iche dabere na àgwà na ika. Ngwa ahịa ọgwụ ukwu, nke ndị dọkịta na-eme ka o sie ike ịbịa site na ya ma ọ bụ doro anya na ọ dị oke ọnụ - ruo pasent iri karịa ma e jiri ya tụnyere ala / ahịa ojii.
Na ahịa ojii (ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa ọgwụ na ebe nrụọrụ weebụ) Ule nke ere si na $ 45 gaa $ 90 maka 10ml (100mg kwa ml) mkpuchi. Ụdị ego dị iche iche na-abụkarị n'ihi àgwà na ịdị ọcha nke ngwaọrụ eji, ike, na nnweta na ahịa mpaghara.
8.Buy Testosterone Propionate ntụ ntụ online
Ọ bụrụ na ị na-achọ testosterone propionate maka ire ere, ị nwere ike ịnye ọgwụ a ugbu a, ma mee ndokwa maka nnyefe. Ịzụta testosterone propionate online, adịghị mkpa Iji dojo.provide ọgwụ dọkịta, ma ọ bụ hapụ ụlọ ahụ. Naanị ịkwesịrị Iji tinye na ebe nrụọrụ weebụ Anyị Iji zipu ozi-e, ga-enweta nzaghachi n'ime oge 30, ngwaahịa nkwukọrịta na usoro nke ịkwụ ụgwọ, ịchọrọ ịhazi ndọtị maka gị.
N'ikpeazụ, chere ka ngwugwu ahụ bịa n'ọnụ ụzọ!
Ebee ka ịzụta Testosterone Enanthate raw ntụ ntụ online?
Kedu otu esi ahọpụta onye na-ebukwasi ihe nke sildenafil citrate	Zụrụ Testosterone Enanthate ntụ ntụ na nnukwu